I-OnePlus 6T iya kuphehlelelwa ngo-Okthobha ngokunyuka kwamaxabiso kubandakanya | I-Androidsis
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo i-OnePlus 6 ifike kwintengiso. Sisiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina, olunempumelelo enkulu kwintengiso yamanye amazwe. Njengesiqhelo, inkampani isebenza ngoguqulelo oluphuculweyo lwayo oluya kufika ekwindla. Sithetha nge-OnePlus 6T, esele ifikelele kuthi ngomhla onokuba sisungulo, ubuncinci okwethutyana.
Le OnePlus 6T iya kuba luhlobo olufana kakhulu nomnxeba osungulwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Olunye uphuculo kulindeleke, nangona okwangoku kungaziwa ukuba zeziphi iindawo eziya kwenziwa kuzo.
Le fowuni kulindeleke ukuba ifike kwintengiso ngo-Okthobha. Ke iinyanga ezintlanu ziya kube zidlulile phakathi kokumiliselwa kweemodeli ezimbini zomenzi. Ixesha elifutshane, kwaye oko kunokuchaphazela ukuthengiswa kweefowuni ezimbini.
Kwakhona, i-OnePlus 6T kulindeleke ukuba ifike ngokunyuka kwamaxabiso. Ayikwazanga kuqinisekisa, nangona amanye amajelo eendaba athi ifowuni iya kubiza i-550 yeedola. Kukuphi ukunyuka kwamaxabiso okuncinci, kweedola ezingama-20 kuphela, xa kuthelekiswa nemodeli yoqobo eyasungulwa entlakohlaza. Umahluko omncinci kule meko.
Nangona uphawu luyangcikivwa ngenxa yokuba iimodeli zalo zinyuka ngexabiso kunyaka ngamnye odlulayo. Ke ngoko, intengiso ayinakufumana konke oko Ukunyuka kwamaxabiso ekufanele ukuba kucwangciselwe le OnePlus 6T. Kwimeko apho oku kunyuka kwamaxabiso kugqityiwe.
Ngelo xesha utshintsho oluza kuqaliswa kule OnePlus 6T alwaziwa. Imodeli yonyaka ophelileyo yayinokuphuculwa koyilo, kunye nezinye izinto. Kodwa utshintsho aluzange lube ngaphezulu. Ke ngoko, kubonakala ngathi kulo nyaka asilindelanga kutshintsho olukhulu kwimodeli enye ukuya kwenye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » I-OnePlus 6T iza kufika ngo-Okthobha ngokunyuka kwamaxabiso